OpenShot 2.4.2 dia misy fiasa vaovao sy vokatra vaovao | Avy amin'ny Linux
Andro vitsy lasa izay ilay mpampanonta horonantsary multiplatform malaza OpenShot dia nohavaozina amin'ny endriny vaovao 2.4.2 tonga miaraka amina fiasa vaovao maromaro, fanitsiana bibikely isan-karazany manodidina ny kinova teo aloha izay manatsara ny fahamarinan'ny tonian-dahatsoratra ary nanampy vokany vaovao.
Amin'ny alàlan'ny fanambarana iray Ny ekipa fampandrosoana OpenShot dia nanambara ny fisian'ny kinova vaovao OpenShot 2.4.2 izay azontsika sintonina sy apetraka amin'ny rafitray ankehitriny.
1 Momba ny OpenShot
2 Kinova vaovao Openshot 2.4.2
3 Ahoana ny fametrahana OpenShot 2.4.2 amin'ny Linux?
Momba ny OpenShot
Ho an'ireo mpampiasa mbola tsy mahalala OpenShot dia azoko lazaina aminao izany, OpenShot dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana maimaimpoana, ity editor ity dia lampihazo miampita ka azo ampiasaina amin'ny GNU / Linux, FreeBSD, Windows ary MacOS.
OpenShot dia mpamoaka horonantsary izay tena mora ampiasaina ary hamela antsika hanao zavatra maro.
Amin'izao fotoana izao ny tonian-dahatsary dia mety amin'ny fanapahana sy fanovana horonantsary haingana sy mora. Ny fampiharana mampiasa ny tranomboky FFmpeg ary afaka mamaky sy manoratra ny ankamaroan'ny endrika horonan-tsary sy sary.
Entre ny mampiavaka azy afaka miavaka isika:
Azo atao ny mamorona sary mihetsika.
Tohana koa ny lohateny sy ny sary mihetsika 3D. Mba hamoronana azy ireo dia mila mametraka Blender isika.
Azontsika atao ny manova ny haben'ny clip video, manova ny bika aman'endriny, manaparitaka ary manova ny notapatapahina, manova ny fantson'ny alpha, toerana, manodina ny horonan-tsary, sns.
Ny isan'ny dian-tongotra sy ny sosona azontsika ampiasaina dia tsy voafetra.
Isan'ny tetezamita tsara amin'ny topi-maso mialoha ny fotoana.
Mamorona firafitra na sary misongona ary asio mari-drano.
Ny fotoana fanovana horonantsary an-tserasera dia misy ny fanohanan'ny drag and drop, scrolling, zooming, ary fanovana hafa.
Safidy ahafahana mampifangaro sy manova feo.
Ny programa dia manohana ny vokatry ny horonan-tsary niomerika, ny fiovan'ny toetr'andro, ny grayscale, ny famirapiratana, ny chroma key, ary maro hafa.
Làlana horonan-tsary sy feo marobe.
Kinova vaovao Openshot 2.4.2
Ity famoahana vaovao an'ny tonian-dahatsary horonantsary OpenShot ity dia misy fanamboarana bibikely maro izay nanatsara ny fahamarinan'ny programa, fa ahoana Azontsika atao ny manasongadina amin'ity kinova vaovao ity ny fampidirana ireo vokatra 7 vaovao.
Ireo effets vaovao ireo izay nampiana tao amin'ny editor video Namboarina avy tamin'ny rangotra izy ireo ary efa misy ao amin'ity kinova vaovao ity.
Ireto misy ny vokany vaovao: Fambolena, Hue, Fiovan'ny loko, Pixelate, Bar, Wave, Shift.
Ny tsirairay amin'ireto vokatra vaovao ireto izy ireo dia azo ampiasaina miaraka amin'ny vokatra hafa hahatonga fitambarana mahagaga.
ihany koa endri-javatra vaovao iray hafa izay azontsika asongadina fampifangaroana feo mandeha ho azy.
Miaraka amin'ity endri-javatra vaovao ity, ny audio audio dia ahitsy ho azy. Ohatra, ny làlam-peo avy any aoriana dia azo ahena amin'ny habetsaky ny automatique rehefa takotra amin'ny hafatra am-peo.
Natively ity endri-javatra ity dia tsy mandeha amin'ny laoniny ary afaka alefa amin'ny fananana clip.
Ao amin'ny Openshot 2.4.2 sary nanampy ny fiasan'ny famakiana metadata mihodina amin'ny horonan-tsary sy saryAmin'izany fomba izany, rehefa manafatra horonantsary na sary mankany amin'ny editor, dia hamaky ny metadata fihodinana sy dia hampiseho ny sary na ny horonan-tsary amin'ny toerana nakana azy. Ity fampiasa ity dia mila kinova FFmpeg vaovao.
Entre ireo fanatsarana hafa azontsika asongadina:
Manatsara ny playback audio.
Fanondranana fifanakalozan-kevitra. Ny fandrosoana dia aseho amin'ny lohateny am-baravarankely, izay misy ny masontsivana fampisehoana sasany.
Ankehitriny ny AAC no codec audio default ho an'ny default matetika.
Codecs FFmpeg Libav andrana notohanana ary azo ampiasaina amin'ny OpenShot izao.
Ahoana ny fametrahana OpenShot 2.4.2 amin'ny Linux?
Si te-hametraka an'ity kinova vaovao ity ve ianao? an'ity mpampanonta horonantsary ity amin'ny rafitrao, dTsy maintsy mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa ianao y ao amin'ny fizarana fampidinana anao afaka mahazo AppImage ianao ahafahanao mametraka ny tonian-dahatsoratra amin'ny rafitrao.
O Raha tianao dia azonao atao amin'ny terminal ity manaraka ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » OpenShot 2.4.2 tonga miaraka amin'ny endri-javatra vaovao sy ny vokany vaovao